သင်ဟာ Opera ချစ်သူတစ်ယောက် (သို့) Jazz ဖန်တစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် rap ပေါ့။ ဘယ်တေးဂီတဖြစ်ဖြစ် သင့်ဦးနှောက်ကို ထူးခြားဖွယ် အကျိုးကျေးဇူးတွေ မြောက်များစွာသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
တေးဂီတဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဖျော်ဖြေရေး တစ်ခုထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ ၎င်းဟာ လူတစ်ချို့အတွက် အချစ်ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်သလို တစ်ခြားလူတွေအတွက်တော့ ဘဝရဲ့ မှတ်တိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကျေနပ်အားရမှုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ တေးဂီတဟာ သင့်ရဲ့ အတွေးတွေ၊ လုပ်ဆောင်မှုတွေ ပြီးတော့ ခံစားချက်တွေကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလောက်အောင်အထိ လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ တေးဂီတဟာ သင့်ကို ရယ်မောစေတယ်၊ အပန်းပြေစေတယ်၊ ကစေနိုင်တယ်၊ သင့်ရဲ့ mood ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှု၊ စွမ်းအင်ကို မြှင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာနာမှုတွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သလို နာကျင်မှုတွေကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ ကျန်းမာရေးအားလုံးအတွက် တေးဂီတရဲ့ တစ်ခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ တေးဂီတဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်
ကစားခြင်းဆိုတာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ဆရာဝန်တွေ၊ စိတ်ပညာရှင်တွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အလေးပေးဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တေးဂီတနဲ့ ကစားမယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးငယ်တွေမှာ တေးဂီတသံကို စူးစမ်းခြင်း (သို့) သီချင်းအတူတကွသီဆိုခြင်းတွေဟာ မူကြိုကလေးဘဝစိတ်ခံစားချက်တွေကို အံ့ဩဖို့ကောင်းလောက်အောင် လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တဲ့။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ တေးဂီတနဲ့ ကစားခြင်းဟာ ကလေးငယ်ရဲ့ ကျောင်းနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၊ သိမြင်မှုစွမ်းရည်၊ စာဖတ်စွမ်းရည်၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို လျော့ကျစေနိုင်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်းနှင့် တစ်ခြားဆိုးရွားတဲ့အမူအကျင့်တွေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရ ကျောင်းမှာ (သို့) အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တေးဂီတကို နားဆင်ခြင်းဟာ ကျောင်းသားတစ်ယောက်အတွက် အိမ်စာတွေပိုလုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
၂။ တေးဂီတဟာ ကားမောင်းနေစဉ်မှာ သင့်ရဲ့ mood နှင့် performance ကို လွှမ်းမိုးစေနိုင်တယ်
လူအများစုဟာ ကားထဲမှာ သီချင်းနားထောင်ရတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်တွေကို ငြိမ်သက်စေဖို့ (သို့) အချိန်တွေကြာလွန်းပြီး ငြီးငွေ့ဖို့ကောင်းတဲ့ ခရီးတွေအတွက် ဖိစီးမှုတွေနဲ့အတူ လျှော့ချနိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေမသိသေးတာက သီချင်းနားထောင်ရင်း ကားမောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ”driving performance” ကို တိုးမြှင့်စေနိုင်တာထက် စိတ်အာရုံပျံ့လွှင့်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
Barbara Millet လေ့လာစမ်းသပ်ခဲ့သော me- analysis လေ့လာမှုအရ driving performance အပေါ်မှာ တေးဂီတရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို စမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ တေးဂီတနားထောင်ပြီး ကားမောင်းခြင်းဟာ ပိုအန္တရာယ်ရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသာ ပြသခဲ့ပါတယ်။
၃။ တေးဂီတဟာ sound sleep ကို တိုက်တွန်းပေးနိုင်တယ်
ညတွေမှာ အိပ်လို့မရတာတွေ ကြုံတွေ့ရဖူးပါသလား? အဲဒီ့နောက်မှာ တေးဂီတတွေဟာ သင့်ကို ပိုအိပ်ကောင်းစေဖို့ ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုတွေအရ တေးဂီတနှင့် အိပ်စက်ခြင်းအကြား အပြုသဘောဆက်သွယ်မှုတွေကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ နားထောင်ဖို့အကောင်းဆုံးတေးဂီတတွေဟာ ဘယ်လိုတေးဂီတအမျိုးအစားတွေဖြစ်မလဲ? အမျိုးမျိုးသော ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောလေ့လာမှုတွေအရ ဘယ်လိုတေးဂီတအမျိုးအစားတွေဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းသံသရာကို အကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ တစ်မိနစ်လျှင် ၆၀ ကြိမ်နှုန်းစည်းချက်ရှိတဲ့ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော အပန်းဖြေဂီတ (သို့) တေးဂီတတွေဟာ သင့်ရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဇုန်ကို မြန်မြန်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။
၄။ တေးဂီတတွေဟာ သင့်ဦးနှောက်နှင့် သင့်ရဲ့ အမြင်အာရုံစွမ်းရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်
တေးဂီတဟာ သင့်ရဲ့ အမြင်အာရုံယိုယွင်းမှုတွေကို ကူညီပေးနိုင်တာ သင်သိပါသလား? နောက်ဆုံးလေ့လာမှုတွေအရ ရေရှည်ဂီတလေ့ကျင့်မှုတွေဟာ ဂီတသမားတွေနှင့် ဂီတသမားမဟုတ်သူတွေအကြား အမြင်အာရုံကွဲပြားမှုတွေ ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ရေရှည်ဂီတသင်တန်းဟာ အမြင်အာရုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး တစ်ခြားသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ တေးဂီတဟာ ဦးနှောက်နာကျင်မှုတွေကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်
တေးဂီတဟာ စိတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ဦးနှောက်နာကျင်မှု (TBI) ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာ ကုသနိုင်တဲ့ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ TBI ဟာ ကျွန်တော်တို့ဦးနှောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သော အလုပ်လုပ်သောမှတ်ညဏ်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းခြင်းတို့ကို အားနည်းစေနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာကတည်းက တေးဂီတကုထုံးတွေဟာ ဦးနှောက်ဒဏ်ရာရပြီးနောက် အံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့ အောင်မြင်မှုရလဒ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။